टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी गौचरण टोललाई — KhabarTweet
टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी गौचरण टोललाई
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २२, २०७७ समय: १९:३१:५९
भोजपुर–भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ४ को आयोजनामा भएको टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधी गौचरण टोलले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ । बुधबारदेखि भएको प्रतियोगितामा षडानन्द नगरपालिका वडा नं. ४ का सात ओटा टोलका खेलाडी सहभागी थिए । प्रतियोगिताको उपाधी गौचरण टोलका दावा शेर्पाको टिम क्याप्टेनमा सहभागी भएका खेलाडी टिमले प्रतियोगिताको उपाधी आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको हो ।
खेलमा वडा नं. ४ का केराबारी दुबे, बैद्य गाउँ, काभ्रे मालबासे, माथिल्लो प्रगती टोल चर्च, गौचरण टोल, हाम्रो दिङ्ला र साङ्राङ टोलको सहभागी रहेको थियो । खेलमा बैद्य गाउँ चौथो भएको थियो भने हाम्रो दिङ्ला टोल तेस्रो भएको थियो । प्रतियोगिताको उप विजेता माथिल्लो प्रगति टोल भएको हो भने गौचरण टोल विजेता भएको हो ।
प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो हुने टिमले क्रमश नगत रु १० हजार, ७ हजार, ५ हजार र १५ सय साथमा प्रमाण पत्र पाएका छन् । खेलमा सहभागी हुने अन्य टिमले रु १ हजार प्राप्त गरेका छन् ।
खेल क्षेत्रलाई सधैं प्राथमिक्ताका साथमा अगाडी बढाउने साथै खेल क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सबैको साथ सहयोगको आवश्यक रहेको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष किशान राईले बताए ।